Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Hepatitis C (စီ) ပိုး
အသဲရောင် (စီ) တွေ့ရင် ရောဂါလက္ခဏာမရှိဘဲနေတတ်လို့၊ အတော်များများက ဆေးစစ်တဲ့အခါ အမှတ်မထင် ပိုးရှိနေတာကို တွေ့ကြရတယ်။ (စီ) ပိုးတွေ့တယ်လို့ဆိုရင် သူဟာကမ္ဘာပေါ်ကလူပေါင်းသန်း ၁၇ဝ ထဲက တယောက်ပါ။ အကြောက်မကြီးအောင် ပြောရရင် ၁ဝဝ မှာ ၈ဝ-ဂ၅ ယောက်လောက်ကနာတာရှည် မဖြစ်ကြပါ။ နာတာရှည်ကနေ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးဝါးတာတွေဖြစ်တဲ့ ရာနှုန်းကလည်း ၅ ဂဏန်းအောက်မှာပါ။
(စီ) ပိုး အဝင်ခံရရင် အစတော့ တုပ်ကွေးလိုပါဘဲ။ မစားချင်မသောက်ချင်၊ အားယုတ်၊ ပျို့ချင်သလိုနေ၊ အဆစ်တွေ အသားတွေနာ၊ သတိထားရင် အသဲရှိရာဗိုက်ညာဘက်အထက်နားမှာနာမယ်။ ကိုယ်ပူတာလဲရှိနိုင်တယ်။ ကြာလာရင် ဝါလာမယ်။ အများသိကြတဲ့ (ဂျွန်းဒစ်)။ ကြာတယ်ဆိုတာ ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီနိုင်တယ်။ ရောဂါလက္ခဏာမပေါ်ပေမဲ့ ပိုးက အသဲကို ဖျက်နေပြီ၊ သူများကိုလဲ ကိုယ့်သွေးနဲ့ထိရင် ကူးနိုင်နေပြီ။
• သူတို့အထဲက ၆ဝ-၈၅% က နာတာရှည် ဖြစ်လာရင်လဲရောဂါလက္ခဏာတွေဟာရှိသူတွေမှာသာရှိမယ်။ သူ့အသဲကပျက်စီးစပြုလာမယ်။ နှစ်တွေ ကြာမှလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ • နာတာရှည် Chronic Hepatitis C ဆိုတာဆိုးဝါးတဲ့ရောဂါတခု ဖြစ်တယ်။
HIV ရှိနေသူတွေကို ဘယ်လို CD4 count 200 cells/mm3 ထက်နည်းလာရင် ဆေးပေးတယ်။ 200-350 cells/mm3 ဆိုရင်ပေးတာလဲလုပ်တယ်။
1. Hepatitis C (1) (စီ) ပိုး http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/11/hepatitis-c.html
2. Hepatitis C (2) (စီ) ပိုး နောက်ဆက်တွဲ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/03/hepatitis-c.html
3. Hepatitis C (3) (စီ) ပိုး (ဗိုင်ရယ်လ်-လုဒ်) http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/02/hepatitis-c-2.html
4. Hepatitis C Vaccine အသဲရောင် (စီ) ကာကွယ်ဆေး အလားအလာရှိ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2012/01/hep-c-vaccine.html